Marriott oo hawlgal ku leh Huteelo cusub oo ku yaal Hindiya, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives iyo Nepal
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Marriott oo hawlgal ku leh Huteelo cusub oo ku yaal Hindiya, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives iyo Nepal
Marriott International ayaa maanta ku dhawaaqday inay saxiixday 22 heshiisyo hoteel oo cusub oo ku yaal Koonfurta Aasiya-oo ka kooban Hindiya, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives iyo Nepal-18kii bilood ee la soo dhaafay, iyagoo filayay inay ku daraan in ka badan 2,700 qol oo ay ku soo kordhinayaan faylalka xawliga ku socda.
Marriott International hadda waa silsiladda huteelka oo leh qolalkii ugu badnaa ee gobolka Koonfurta Aasiya waxayna rajaynaysaa inay sii waddo kobockeeda adag oo ay la socoto saxiixyadan cusub.
"Sannad aan la saadaalin karin, saxiixyadani waxay markhaati u yihiin adkaysiga iyo kartida Marriott International ee waditaanka koboc xoog leh oo ku dhex jira muuqaalka martigelinta oo sii socda," Rajeev Menon - Madaxweynaha Aasiya Pacific (marka laga reebo Shiinaha Weyn), Marriott International. “Waa calaamad muujinaysa kalsooni ka timaadda milkiilayaasheena iyo ganacsatadeenna kuwaas oo qayb muhiim ah ka ahaa safarkayaga kobaca. Waxaan uga mahadcelineynaa taageeradooda joogtada ah iyo kalsoonida ay ku qabaan awoodda summaddeena maadaama aan sii wadno soo dhoweynta dadka safarka ah. ”
Saxiixyadani waxay xoojinayaan ballanqaadkeenna Koonfurta Aasiya oo ah gobol sare oo suurtagal ah halkaas oo aan ku sii wadno inaan ku korno oo aan la shaqeyno saldhig macmiil oo sii ballaarinaya annagoo soo bandhignay in badan oo ka mid ah noocyada Marriott iyo waaya -aragnimada gaarka ah ee meelaha xiisaha leh, ” Kiran Andicot - Madaxweyne Ku -xigeenka Gobolka Horumarinta, Koonfurta Aasiya, Marriott International. "Waxaan rajeyneynaa furitaanka hoteelladaan cusub mustaqbalka iyo sahaminta fursadaha horumarinta mustaqbalka ee gobolka oo dhan."
Rabitaanka Milkiilaha ee Noocyada Raaxada
In ka badan saddex meelood meel mashaariicdii dhowaan lagu saxiixay Koonfurta Aasiya 18-kii bilood ee la soo dhaafay waxaa ka mid ah huteelada iyo meelaha loo dalxiis tago ee raaxada leh, oo ka kooban calaamado sida JW Marriott iyo W Hotels. Tani waxay ka tarjumaysaa baahida sii kordhaysa ee dadka socotada ah ee ku aaddan adeegyada iyo adeegyada aadka u fiican. Safarradu waxay filan karaan bilowga sumadda W Hotels ee Jaipur W Jaipur 2024. Marka la furo, hudheelku wuxuu rajaynayaa inuu khalkhal geliyo caadooyinka raaxada dhaqanka leh adeeggiisa summada leh, tamarta faafa, iyo waaya -aragnimada cusub. Iyada oo ku qotonta fayoobaanta guud, guryaha JW Marriott waxay bixiyaan hoy loogu talagalay in loogu oggolaado martida inay diiradda saaraan inay dareemaan dareen dhan-maanka ku jira, ku nafaqeeyaan jirka, kuna soo nooleeyaan ruuxa. Iyaga oo rajaynaya inay ka soo baxaan meelo badan oo kala duwan oo ku yaal Koonfurta Aasiya shanta sano ee soo socota, socotada ayaa sugi kara JW Marriott Ranthambore Resort & Spa ku yaal mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee duurjoogta Hindiya, Beerta Qaranka ee Ranthambore; JW Marriott Chennai ECR Resort & Spa ee xeebta koonfureed ee quruxda badan ee Hindiya; JW Marriott Agra Resort & Spa dhulka TAJ MAHAL; iyo markii ugu horreysay ee astaanta JW Marriott ee Goa iyo Shimla - oo ah labada dal ee ugu caansan meelaha loo dalxiis tago ee Hindiya - oo leh JW Marriott Goa iyo JW Marriott Shimla Resort & Spa.
JW Marriott Hotel Bhutan, Thimphu waxaa la filayaa inay calaamadiso bilowgii astaanta JW Marriott ee Bhutan, waxaa la filayaa inay furto 2025 -ka oo ay soo bandhigto waaya -aragnimo la hubo oo u dabbaaldegaya ruuxa nabdoon ee dhulka.
Maldives waxay filaysaa hudheelkeeda labaad ee JW Marriott sanadka 2025, marka JW Marriott Resort & Spa, Embhoodhoo Finolhu - South Male Atoll oo ka kooban 80 guri oo barkado ah ayaa la filayaa in la furo. Saxiixu wuxuu daba socdaa The Ritz-Carlton Maldives, Jasiiradaha Fari oo dhowaan la furay, isagoo xoojinaya raadadkii Marriott ee goobtii firaaqada caanka ahayd.
Xulo Calaamadaha Sii wad koritaanka
Ka kooban calaamado sida Barxadda Marriott, Fairfield by Marriott, Four Points by Sheraton, Aloft Hotels iyo Moxy Hotels, noocyada Marriott ee la xushay ayaa sidoo kale ka sii socda Koonfurta Aasiya oo matalaya in ka badan 40 boqolkiiba 22 ka mid ah XNUMXkii mashruuc ee huteel ee dhowaan la saxiixay. Astaanta Moxy, oo caan ku ah waayo -aragnimadeeda, qaab -ciyaareedkeeda iyo qiimaha qiimaynta la heli karo, ayaa la filayaa inay ka bilaabato Hindiya iyo Nepal Moxy Mumbai Andheri Galbeed ee 2023 iyo Moxy Kathmandu in 2025
Suuqyada sare iyo kuwa sare ayaa weli ahmiyadda u leh Marriott International ee Hindiya, iyada oo ka faa'iideysanaysa baahida xooggan ee milkiilayaasha iyo dadka socotada ah ee noocyada la xushay. Waxaa loogu talagalay socotada ganacsiga casriga ah, Barxadda Marriott iyo Fairfield oo ay wataan magacyada Marriott waxay u heellan yihiin adeeg marti ah oo caqli badan oo feker leh, iyadoon loo eegayn ujeeddada safarkooda. Heshiisyadii dhowaan la saxiixay, Barxadda Marriott waxay filaysaa inay ku darto shan guri oo cusub dhismayaasha jira ee 20 hudheel oo ku yaal Koonfurta Aasiya. Afar ka mid ah guryahaas ayaa la filayaa inay furmaan shanta sano ee soo socota waxayna ku jiri doonaan hogaaminta suuqyada heerka labaad ee Hindiya gudaheeda: Barxadda Marriott Gorakhpur; Barxadda Marriott Tiruchirappalli; Barxadda Marriott Goa Arpora; iyo Barxadda Marriott Ranchi. Fairfield waxay filaysaa inay ku darto laba guri oo cusub Jaipur. Gudaha Sri Lanka, the Barxadda Marriott Colombo wuxuu rajeynayaa inuu calaamadeeyo astaantii ugu horreysay ee Barxadda ee dalka, oo la qorsheeyay in la furo 2022.
Summadaha Sare (Premium Brands) Sibidhka Cagtooda
Waxaa la filayaa inay sii kordhiso kororka sumcadaha qaaliga ah ee Koonfurta Aasiya, saxiixyadii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah Katra Marriott Resort & Spa gudaha Hindiya iyo Le Meridien Kathmandu, kaas oo la filayo inuu noqdo kii ugu horreeyay ee astaanta Le Meridien ee Nepal. Intaa waxaa dheer, ee Bhaluka Marriott Hotel wuxuu rajaynayaa inuu calaamadeeyo gelitaanka sumadda Marriott Hotels ee Bangladesh, oo la filayo inuu furmo 2024.
Marriott International waxay meel fiican ka joogtaa Koonfurta Aasiya iyada oo leh 135 huteel oo ka shaqeeya 16 nooc oo kala duwan oo ku kala yaal shan waddan, oo loogu talagalay in lagu bixiyo waayo-aragnimo kala duwan dhammaan qaybaha socdaalka. Noocyada hadda ka shaqeeya Koonfurta Aasiya waxaa ka mid ah: JW Marriott, St. Regis, The Ritz-Carlton, W Hotels, iyo The Collection Luxury ee qeybta raaxada; Huteelada Marriott, Sheraton, Westin, Portfolio Tribute, Le Meridien, Renaissance iyo Marriott Executive Apartments ee qeybta qaaliga ah; Barxadda Marriott, Afar dhibcood oo ay leedahay Sheraton, Fairfield oo ay leedahay Marriott iyo Aloft Hotels, qaybta adeegga ee la xushay.